Wararka Maanta: Khamiis, Feb 12, 2009-Cabsi aad u weyn oo soo food saartay Ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Dalkan Koofur Afrika
Taas ayaa sababtay in caradii ay dowladda u qabeen ay kaa dul dhaceen ganacsatada Soomaalida ah iyo kuwa kale ee ajnabiga ah oo ay ku eedeeyeen in dowladdu aanay wax cadaadis ah saarin ganacsigooda.
Goobaha ay cabsida weyni ka taagan tahay ayaa waxa ka mid ah tuulooyinka iyo xaafadaha ku xeeran magaalada Cape Town.
Mar aan qadka taleefanka kula xiriiray ganacsade Soomaaliyeed oo magaciisa la yiraahdo Ismaaciil Maxamed ( Jawiil ) oo dagan xaafadda DUNNUN ee ku taala duleedka magaalada Cape Town ayaa waxa uu HOL u sheegay in ay cabsi weyn qabaan xaaladduna ay aad u kacsantahay, ganasatada badankooduna ay halkaasi ka rarteen alaabahoodii u yaalay dukaamada iyo xaafadihii ay daganaayeen inta hartayna ay iyaguna isku diyaarinayaan sidii ay u guuri lahaayeensaacadaha soo socda.
Ciidamada booliska Koofur Afrika ayaa ilaalinaya ammaankooda inta ay ka guurayaan halkaasi waayo boolisku sida ay u sheegeen dadka halkaasi ka qaxaya waa ay ku adag tahay in ay hor istaagaan haddii dadka deegaanku ay bilaabaan in ay wax boobaan.
Haddaba waxaa xiisadda sii kiciyay milkiilayaasha iyo darawaliinta gaadiidka dadweynaha oo shaqo ka fariisi ku jira taasoo sababtay in dadkii magaalooyinka waa weyn u shaqo tegi lahaa ay waayeen gaadiid ay isticmaalaan oo ay wadooyinka xaafadaha koox-koox u socdaan iyagoo ku dhawaaqaya ereyo ka dhan ah dadka ajnabiga ah.
Sidii horayba u dhacday sanaddii aynu soo dhaafnay kumanaan goobood oo ganacsi iyo guryo isugu jira oo ay shisheeye leeyihiin ayaa cagta la mariyay iyadoo ay xusid mudan tahay in la dilay oo naftooda la dhaafiyay 70 ruux.
Sanadkan 2009ka dilka Soomaalida loogu geystay dalka Koofur Afrika waxaa uu gaarayaa ilaa 7 ruux oo saddex ka mid ah lagu dilay xaafado ka tirsan magaalda Cape Town, waxaana ugu dambeeyay dilkii 4 maalmood kahor loo geystay alle ha’u naxariistee marxuun Axmed AbuukarXuseen oo lagu dhex toogtay dukaankiisa oo ku yaalay xaafada DELAFT oo ku taala duleedka magaalada Cape Town.